अध्ययनको आनन्द ! [लक्ष्मणरेखा] | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७८ बैशाख ७, मंगलवार ११:१२ गते
आखिर के हो अध्ययन ?
‘मस्तिष्कलाई अध्ययनको त्यति नै आवश्यकता पर्दछ, जति शरीरलाई व्यायामको’— जोसेफ एडिसन ।
‘अध्ययनले हामीलाई आनन्द दिन्छ, अलङ्कृत पार्दछ र योग्यता प्रदान गर्दछ’— फ्रान्सिस बेकन ।
‘अध्ययन आकाशमा चम्कने सूर्यजस्तै हो’— विलियम शेक्सपियर ।
‘अध्ययनभन्दा सस्तो कुनै मनोरञ्जन छैन, न त यसले दिनेजस्तो स्थायी अर्को कुनै खुसी हुन्छ’— मन्टेग्यु ।
‘तीन वर्षसम्म लगातार अध्ययन गरेर पनि आफ्नो आचरणमा सुधार नगर्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो छ’— कन्फ्युसियस ।
‘जसरी सधैँ खाइरहनाले मानिस शारीरिक दृष्टिले हृष्टपुष्ट हुन्छ, त्यसरी नै निरन्तर अध्ययन गर्नाले मानिस ज्ञानी हुन्छ’— जेरेमी कोलियर ।
‘अध्ययनप्रतिको प्रेमले जीवनमा आउने विषाद र क्लान्तिका क्षणहरुलाई आनन्द र प्रसन्नताका क्षणहरुमा परिवर्तित गर्ने क्षमता राख्दछ’— मन्टेस्की ।
‘मानिस जहिले पनि अध्ययनको काममा लागिरहनुपर्दछ’— मनुस्मृति ।
‘ती मानिस जो अध्ययन गर्दैनन्, केवल मानिसले लगाउने कपडा लगाएका पशु हुन्’— चिनियाँ उखान ।
‘अध्ययनसम्बन्धी यी तीन नियमहरु पालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ : पहिलो एक वर्ष पनि पुरानो नभएको पुस्तक पढ्नु, प्रसिद्ध नभएको पुस्तक नपढ्नु र आफ्नो रूचिको विषयभन्दा बाहिर रहेको पुस्तकको अध्ययन नगर्नु’— इमर्सन ।
मानिस जीवित प्राणी हो । उसको जीवन शरीर र आत्मा मिलेर बनेको हुन्छ । स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर दुवैको आवश्यकता पर्दछ । शरीरलाई शारीरिक व्यायाममार्फत स्वस्थ बनाउन सकिन्छ भने मन र मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउने विधि भनेको चिन्तन हो, अध्ययन र मनन हो । मानिस भनेको नै चेतनाको दोस्रो नाम हो । मन प्रधान हुने भएकाले उसलाई मानिस भनिएको हो । अध्ययनले हाम्रो मस्तिष्कको व्यायाम हुन्छ भनेर जोसेफ एडिसनले पनि भनेका छन् । अध्ययन गरेको व्यक्ति नै अनावश्यक तनाव, चिन्ता र अप्ठ्याराहरुबाट मुक्त हुन सक्दछ ।
अस्वस्थ मस्तिष्कमा विचारहरु पनि स्वस्थ हुन पाउँदैनन् । स्वस्थ विचारभित्र प्रेम, त्याग, सहिष्णुता, सहयोग र सहकारिताजस्ता गुणहरु पर्दछन् । पुस्तकहरुको अध्ययनले हामीभित्र यी गुणहरुको विकास गर्न ठूलो सहयोग पुग्दछ ।
अध्ययन आफैँमा शृङ्गार
अध्ययनले हामी स्वस्थ हुने कुरामा कुनै सन्देह रहेन नै । यसका माध्यमले हामीभित्रको सौन्दर्य पनि अझ निखारिएर बाहिर आउँछ । अध्ययनकै माध्यमले हामी मनभित्रका निराशा, पीडा, दुःख र सन्देहहरु हटाएर आनन्दित हुन्छौँ । अध्ययनले हामीलाई आनन्द दिन्छ, अलङ्कृत पार्दछ र योग्यता प्रदान गर्दछ भनेर फ्रान्सिस बेकनले पनि भनेका छन् । बाहिरी गरगहना क्षणिक हुन् । यी सबै बाहिरी शृङ्गारका साधन हुन्, तर अध्ययन हाम्रो कहिल्यै ननासिने गहना हो । अध्ययनशील मानिसले थप सिँगारपटारका लागि समय र सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्दैन ।
अध्ययन नै उज्यालोको प्रतीक हो । यो के हो, त्यो के हो ? भनेर थाहा पाउनका लागि आकाशमा सूर्योदय हुनुपर्दछ । जब आकाशमा सूर्य उदाउँछन् तब धर्ती उज्यालिन्छ । हामीभित्रको सूर्य भनेकै हाम्रो ज्ञान हो, अध्ययन हो । आकाशको सूर्य त बरू अस्ताउने र उदाउने भइरहन्छ, तर हामीभित्रको ज्ञानको सूर्य भने एकपटक उदाएपछि उदायो उदायो । यही ज्ञानका माध्यमले मानिसहरु शरीरको समाप्तिपछि पनि अमर भएर बाँचिरहन्छन् । विलियम शेक्सपियरले भनेका छन्— ‘अध्ययन आकाशमा चम्कने सूर्यजस्तै हो ।’ एउटा सूर्यको उदयमा सारा संसार आनन्दविभोर भएर ब्यँुझन्छ । त्यसरी नै एक जना विद्वान्को विद्वताका कारण हजारौँ, लाखौँ मानिसले ज्ञानको दिव्यानुभूति गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
अध्ययन यति मह¤पूर्ण भएर पनि हामीमा यसको संस्कार विकास हुन सकेन । जीवनमा भौतिक समृद्धिमात्रै ठूलो कुरो होइन । आन्तरिक विवेकले सम्पन्न हुनु सबैभन्दा मह¤वको विषय हो । समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रका लागि धेरै कुरा गरेर पनि हामीले अध्ययनको काम गर्न सकेनौँ । पढाइ हाम्रालागि मोजभन्दा धेरै बोझ बनेको देखिन्छ तर अध्ययनको गहिराइमा जति हामी गहिरिँदै जान्छौँ त्यति नै आनन्दको वर्षा हुन सुरू गर्दछ भन्ने सत्यबाट मानिसको ठूलो हिस्सा बेखबर देखिन्छ ।
यसका लागि कुनै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्दैन । हामी कतै होटलमा गएर सामान्य खाजानास्ता खायौँ भने पनि सयौँ रूपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसरी खाएको खानाले सधैँ तृप्तिको अनुभूति पनि हुँदैन, तर एकपटक किनेको एउटा पठनीय पुस्तकले जीवनभर आनन्द प्रदान गर्दछ । पुस्तकको मनोरञ्जनभन्दा सस्तो संसारमा सायदै अर्को मनोरञ्जन होला । ‘अध्ययनभन्दा सस्तो कुनै मनोरञ्जन छैन, न त यसले दिनेजस्तो स्थायी अर्को कुनै खुसी हुन्छ’— यो मन्टेग्यु भन्ने विद्वान्ले व्यक्त गरेको विचार हो । अध्ययनले दिने खुसी भनेको माछामासु र जेरीपुरी खान पाउँदा हुने सुखी होइन । न त यो यौन सम्पर्क गर्न पाएको अवसरले व्यक्तिभित्र पैदा हुने खुसीजस्तो अस्थायी हुन्छ । अध्ययनको खुसी पूर्णतः शाश्वत र स्थायी हुन्छ, जुन हामी अत्यन्त थोरै पैसामा प्राप्त गर्न सक्दछौँ ।
हामी देशदर्शन गर्न भनी हजारौँ, लाखौँ खर्च गरेर बाहिरतिर जान्छौँ । वास्तवमा एउटा पुस्तकमा ती सबै ठाउँहरु हुन्छन् । एउटा पुस्तकमा सारा विश्वदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । पुस्तक भनेको कागज मात्र होइन । किताबका प्रत्येक शब्द आपैmँमा चित्र हुन् । अत्यन्त थोरै पैसामा हामीले खोजेको कुरा पुस्तकमा लेखकले उपलब्ध गराइदिएका हुन्छन् । त्यसैले, अध्ययन मोन्टेग्युले भनेभैmँ सस्तो पैसामा पाइने शाश्वत् मनोरञ्जन हो ।
‘तीन वर्षसम्म लगातार अध्ययन गरेर पनि आफ्नो आचरणमा सुधार नगर्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो छ’— कन्फ्युसियसको यो भनाइले अध्ययनले कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको आचरणमा परिवर्तन गरेरै छाड्ने सत्य व्यक्त गरेको छ । एउटा पुस्तक पढ्दा तत्कालै केही भइहाल्छ भन्न न सकिएला, तर पुस्तकको बारम्बारको अध्ययनले व्यक्तिको चरित्रमा अवश्यमेव परिवर्तन भएरै छाड्दछ । कन्फ्युसियसले जतिसुकै बदमास भए पनि कम्तीमा तीन वर्षभित्र लगातार असल पुस्तकको अध्ययन गर्ने हो भने उसको आचरणमा सुधार आउने कुरा बताएका छन् ।
पुस्तकले कहिल्यै धोका दिँदैन
‘अध्ययनप्रतिको प्रेमले जीवनमा आउने विषाद र क्लान्तिका क्षणहरुलाई आनन्द र प्रसन्नताका क्षणहरुमा परिवर्तित गर्ने क्षमता राख्दछ’ भन्ने विचार व्यक्त गर्ने मन्टेस्की हुन् । मानिसहरुलाई गरिएको प्रेमबाट धोका हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । यदि हामीले अकारण र निरपेक्ष प्रेम गर्ने हो भने त्यो राम्रै होला, तर अपेक्षासहितको प्रेममा केही नपाउँदा वा आपूmले सोचेको जस्तो नहुँदा दुःख पनि लाग्दछ । तर, पुस्तकलाई गरिएको प्रेम कहिल्यै निरर्थक हुँदैन । पुस्तकले हामीलाई कहिल्यै पनि धोका दिँदैन । जीवनमा आउने विषाद र क्लान्तिका क्षणहरु पनि अध्ययनका माध्यमले आनन्दमा बदलिन सक्छन् ।
एउटा चिनियाँ उखान छ– ‘ती मानिस जो अध्ययन गर्दैनन्, केवल मानिसले लगाउने कपडा लगाएका पशु हुन् ।’ यसको अर्थ के हो भने मनुष्यको चेतना र विवेकलाई अद्यावधिक गर्नका लागि पनि अध्ययन आवश्यक छ । अध्ययनबिना हामी मनुष्यताबारे जानकार हुन पनि सक्दैनौँ । जबसम्म मनुष्यता के हो भन्ने हामी जान्दैनौँ तबसम्म जीवनको अर्थ नै के हुन्छ र ? मानिसको कपडा लगाउँदैमा हामी मानिस हुन सक्दैनौँ, न त मानिसको शरीर पाउँदैमा हामी मानिस नै हुन सक्दछौँ । मानवीय मूल्यप्रति जहिलेसम्म हामीभित्र गहिरो आस्था पलाउँदैन र हामी त्यसका अभ्यासी हुन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनको सार्थकता सिद्ध हुँदैन । अध्ययनले हामीलाई जीवन सार्थकताको बाटोतिर डो¥याउँछ ।
अध्ययन भन्नु नै सभ्यताको अर्को नाम हो । हामी जन्मजात विशेष योग्यता लिएर जन्मिएका हुन्छौँ । अध्ययनले हामीभित्रको विशेष योग्यतालाई अझ पुष्पित र फलित तुल्याउन सहयोग पु¥याउँदछ । विचारमा अनेकन फोहोरहरु पैदा भएका हुन सक्दछन् । पुस्तकबाट प्राप्त गर्न सकिने अध्ययनले हामीलाई ती फोहोर सफा गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ । मानसिक स्वास्थ्यको सबैभन्दा सुन्दर स्रोत भन्नु नै पुस्तकहरु हुन् । तिनको अध्ययनबाट हामीले सोचेको भन्दा धेरै आनन्द, शान्ति र सुख हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुभवीहरुको मत रहेको छ ।
चाहे जे गरे पनि र जहाँ गए पनि दैनिक पुस्तकको अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ । पुस्तकको अध्ययनले हाम्रो धेरै पैसा खर्च पनि हुँदैन । थोरै समय खर्च होला तर प्राप्ति अतुलनीय हुन्छ । तपाईंभित्र सभ्यताको विकास हुन्छ । जीवनका अनेकन आयाम र अवस्थाहरुबारे जान्न पाउँदा आनन्दको अनुभूति हुन्छ । यसले आत्मबलको विकास भएर जान्छ, जसका कारण हामी जटिल क्षणहरुमा पनि आशावादी हुन सक्दछौँ ।
कस्ता पुस्तक पढ्ने भन्ने कुरा भने निकै मह¤वपूर्ण हुन्छ । सकेसम्म आफ्नो रूचिका पुस्तक पढ्नुपर्दछ, तर रूचि समाज र जीवनसापेक्ष हुनुपर्दछ भन्ने विद्वान्हरुको मत छ । कम्तीमा पनि जहाँ जाँदा होस्, हाम्रो हातमा वा हाम्रो साथमा पुस्तक होस् । हामी जति अध्ययनशील बन्न सक्दछौँ त्यति नै हाम्रो जीवन धन्य त हुन्छ नै, साथै परिवार, समाज र राष्ट्रले समेत हाम्रो अध्ययनको सुखद परिणाम अनुभव गर्न सक्दछन् । जतिजति अध्ययनको संस्कार हामीले विकास गर्दछौँ त्यति नै व्यर्थ समयमा हुन सक्ने व्यर्थका चर्चा–परिचर्चा, टीकाटिप्पणी र गफगाफबाट पनि हामी मुक्त हुन पुग्दछौँ । खाली समयको सदुपयोग हुन्छ भने त्यो समयमा हुन सक्ने अनावश्यक खर्चबाट पनि हामी बच्न सक्दछौँ । [email protected]